Chaja anyanwụ: anyị na-enyocha teknụzụ a emere maka mmeghari ohuru | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Portillo nke German | | Ike Igwe fotovoltaic
Gba ọsọ na batrị gị na ekwentị gị mgbe ị nọ n'okporo ámá ma ọ bụ na laptọọpụ gị mgbe ị na-arụ ọrụ n'èzí bụ otu n'ime ọnọdụ enweghị olileanya na ọ dịghị onye chọrọ. Eleghị anya ị nụrịrị ma ọ bụ jiri batrị ndị ọzọ iji nye ya ike dị mkpa. Batrị ndị a dị na mpụga ga-ebu ihe ebu ụzọ ewepụ ma ọ naghị enye ụgwọ zuru ezu. Ya mere, taa, anyị na-eweta mgbanwe mgbanwe. Ọ gbasara chaja anyanwụ.
Ma ọ bụ na mmadụ ole na ole maara arụmọrụ nke chaja ndị a yana n'ụlọ ahịa enwere nnweta dị ntakịrị. Anyị ga-enyocha chaja anyanwụ n'ụzọ dị omimi iji mee ka ị hụ elele uru ọ bara na ngwaọrụ ndị ọzọ. Youchọrọ ịma ihe niile gbasara chaja nke anyanwụ? Nọgide na-agụ ma ị ga-achọpụta.
2 Kedu ihe bụ chaja nke anyanwụ?
4 Uru nke chaja nke anyanwụ
5 Isi ọghọm
6 Etu ị ga - esi họrọ chaja gị
Takingghara ịleba anya na teknụzụ dị elu nke ụdị chaja a bụ mmejọ. Ojiji ya, agbanyeghị na ọ nwere oke mpaghara ebe anwụ na-acha, enwere ike ịdị mkpa mgbe ị na-ehi ụra ebe a na-ama ụlọikwuu, dịka ọmụmaatụ, n'oge ezumike na mpaghara ndị ọzọ ebe enwere oke ohia ma ọkụ eletrik pere mpe. isi mmalite.
Chaja chaja abụghị ihe ọzọ karịa ngwa eletriki eletrik nke na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịkwụ ụgwọ ngwa eletriki ọ bụla. Ọ dị mkpa ịnye ike mgbe enweghị ọkụ eletrik ma ọ bụ mgbe ogwe igwe anaghị arụ ọrụ.
Otu n'ime obi abụọ ndị ọrụ nwere banyere ụdị teknụzụ a bụ:
Kedu ihe bụ chaja nke anyanwụ?
Uru nke iji ya
Esi họrọ otu
Ya mere, anyị ga-arụ ọrụ n'otu n'otu obi abụọ niile iji kpochapụ ha.
Chaja dị iche iche ngwa karịa ihe ejiri anyị na batrị mpụga. Ọ bụ ezie na ha nwere ike ịpụta na ha nwere otu ụdị ngwaahịa ahụ, ebe ọrụ ha yiri, ọ bụghị. Chaja ndị na-acha anyanwụ nwere usoro ihe ntanetị nke ejikọrọ na ibe ha site na akwa na plastik. Ngwa a anaghị agbakọta ike ma ọ dị ha mkpa ijikọ na smartphone ma ọ bụ ụfọdụ ụlọ akụ ike ịrụ ọrụ nke ọma.
N'ụzọ dị iche, batrị ndị dị na mpụga nwere otu ogwe igwe, nke ejikọtara dị ka isi iyi ike ọzọ. Emere chaja ndị a maka ndị chọrọ iji anyanwụ dị ka isi ihe na-akwụghachi ụgwọ. N'agbanyeghị enweghị batrị, chaja nke anyanwụ nwere ọtụtụ ogwe ndị nwere ike ikpuchi nnukwu ebe dị ukwuu karị ma si otú a gbanwee ìhè anyanwụ karịa na ọkụ eletrik.
Chaja chaja a kwadebere ya na ihe mmetụta sensọ fotovoltaic dị iche iche. Isi ọrụ ya bụ ịgbanwe ọkụ ka ọ bụrụ ọkụ eletrik. Chaja ndị a dị ka slate ma mejupụta mkpụrụ ndụ fotovoltaic. A na-eji ihe a na-emepụta na semiconductor (nke kachasị silicon). Ihe a na - enweta ntinye na arụmọrụ kachasị mma ma e jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ.
Ozugbo mkpụrụ ọkụ sitere na anyanwụ batara na kọntaktị silicon ahụ, a na-ebufe ike ahụ. Silicon tọhapụrụ elektrọn na ihe niile fọdụrụ bụ iji nyefee ha iji nweta ọkụ eletrik. Ọnụọgụ nke ike a na-ewepụta dị ka ogo ọkụ natara. Enwere ike iji ike chaja nke anyanwụ na-eweta n'oge a ma ọ bụ chekwaa ya na batrị.
Uru nke chaja nke anyanwụ
Typedị ngwaọrụ eletrọniki a nwere ọtụtụ elele. Nke mbu bu na ọ bụ nkwanye ùgwù zuru ezu na gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ na ọ na-eji ume ọhụrụ iji ya arụ ọrụ. Enwere chaja chacha na-ebugharị ma enwere ike itinye ha ebe ọ bụla ịchọrọ. Nanị ọnọdụ ndị chaja ndị a nwere bụ na a ga-enwerịrị ka ọkụ si n’anyanwụ pụta.
Dabere na ụdị chaja ahụ, enwere ike ịchekwa ike ogologo oge. Offọdụ n’ime ha nwere ike ichekwa ume otu ọnwa na ndị ọzọ ruru otu afọ.
Na mgbakwunye, ojiji nke chaja nke anyanwụ na-ewepụ mkpa maka ụgwọ ọzọ. Ihe ị ga - eme bụ ịzụta otu ma nweta ọkụ eletrik nke anwụ na - akwụghị ụgwọ.
Agbanyeghị na enwere ike ịhụ ya dị ka ngwa ngagharị, ọ nwekwara ụfọdụ ọghọm dị ka ngwaahịa niile. Ugwọ a na-ewere dị nwayọ karịa otu chaja. Ọ na-ewekarị ihe ugboro abụọ na oge. A ghakwara iburu n'uche na, iji nweta ụgwọ zuru oke, ọnọdụ ìhè anyanwụ ga-abụrịrị nke kachasị mma. Ma ọ bụghị ya, ha agaghị eju afọ.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ ezie nwere ike ichaji laptọọpụ, ọ bụghị n'ezie kwesịrị ekwesị n'ihi na. Enwere ike iji ya dị ka akụ na-adịru nwa oge. Nsogbu kachasị, dị ka ngwaọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ na ike anyanwụ, bụ na n'oge oyi na oge nnukwu mmiri ozuzo, teknụzụ a na-abaghị uru.
Ọnọdụ na ihu igwe na-aghọ ihe abụọ na-achọpụta ihe na arụmọrụ nke chaja anyanwụ.
Etu ị ga - esi họrọ chaja gị
Taa, e nwere ọtụtụ ụdị chaja ndị a. Ya mere, nhọrọ a ga-ekpebisi ike site na atụmanya ị na-atụ anya inweta. Mgbe ị na-ahọrọ otu n’ime chaja ndị a ọ bụ n’ihi na ị chọrọ ịnwe mmụba n'ọkwa nke nnwere onwe gị. N'ụzọ dị otú a, ị gaghị echegbu onwe gị gabiga oke banyere batrị nke ekwentị ahụ, ebe ọ bụ na ịnwere ike ịgba ya.
Yabụ, ọ bụrụ na ejiri chaja anyanwụ naanị iji chaji ekwentị Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.O zuru ezu karịa. Criteriakpụrụ ndị a ga-eburu n'uche bụ ike chaja nke chaja yana ike batrị ya. Ọ bụrụ na egosipụtara ike na watt awa ma ọ bụ watt na nke abụọ na awa milli-amp. Enwere ndị ọzọ Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.
Ọ dị mkpa ịlele ọ bụrụ na voltage nke chaja na-eweta dị mma maka ngwa a na-eweta. Voltage ga-adị ukwuu ma ọ bụ karịa nke ngwaọrụ anyị chọrọ ịgba. Ọ bụrụ na voltage nke ngwaọrụ ndị ahụ dị elu karịa nke chaja, ọ dị mkpa ịhọrọ chaja nke anyanwụ na batrị batrị dị elu. N’aka ozo, odi nkpa ileba anya n’ihe di n’etiti chaja na ngwa ndi ahu ha gha ebu ebubo tupu ha azuta otu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ikpebi nke ọma ma ị ga-ahọrọ chaja anyanwụ maka njem gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike Igwe fotovoltaic » Chaja chaja
Kedu nnukwu ihe mepụtara na ọ ka mma na ọ dịrịrị na ahịa a ga - enyere aka ịlụ ọgụ mgbanwe mgbanwe ihu igwe dị ọcha. Lee ka esi tinye sel ndị a n'ọfịs anyị ga-abụ nnukwu ihe nyere ụwa anyị a.
Ike a na-apụghị ịgbanwe agbanwe